Muqdisho Oo Maalintii Labaad Bandow Ah. – Calamada.com
Muqdisho Oo Maalintii Labaad Bandow Ah.
calamada February 8, 2017 1 min read
Maalintii Labaad waxaa bandow ah caasimada Somaliya ee Muqdisho’iyadoona waddooyinka waaweyn ee magaalada ay daadsanyihiin ciidamo fara badan oo isugu jira Kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Gabi ahaan waxaa si toos ah u xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho sida wadada Maka al-mukaramah’Wadnaha’Sodonka iyo Warshadaha kuwaasi oo gabi ahaan aysan ka jirin dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo midka ganacsiga.
Bandowga ayaa sabab looga dhigay doorashada madaxweynaha ee lagu wado in saacadaha soo socda ay ka dhacda magaalada Muqdisho’waxeyna dowlada federaalka iyo shisheeyaha ka cabsi qabaan weeraro culus oo kaga yimaada dhanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Habeenkii xalay ayeey aheed markii jugta madaafiicda si aad ah looga wada maqlay xaafadaha mgaalada Muqdisho iyo duleedka magaalada kuwaasi oo u muuqday madaafiic lagu garaacyo qaar ka mid ah xarumaha shisheeyaha iyo kuwa dowlada federaalka.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 11-05-1438 Hijri.
Next: Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.